Puntland oo shir deg deg ah ka yeelatay duufaanta ku dhufatay Gobolada Bari. - Awdinle Online
Puntland oo shir deg deg ah ka yeelatay duufaanta ku dhufatay Gobolada Bari.
Ku-simaha Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, ahna Madaxweyne ku-Xigeenka Maamulkaas Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa Maanta Shir deg deg ah la qaatay Xubnaha Golaha Wasiirada Puntland.
Shirka ayaa waxaa looga arinsanayay xaaladda ka dhalatay duufaanta GATI oo ku dhufatay deegaan xeebeedka Gobolada Bari, Karkaar iyo Gardafu, isla markaana khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed geysatay.
Golaha Wasiirada Puntland ayaa aad u gorfeyay xaalada Saddexda gobol ee Puntland oo roobka duufaanta wata uu ka da’ay iyo sida laga yeelayo , iyaga oo warbixin la xiriirta u gudbiyay Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash.
Ku-simaha Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, ahna Madaxweyne ku-Xigeenka Maamulkaas Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa Guddi u saaray duufaanta, isaga oo amray in si deg deg ah wafdi loogu diro degaannada Roobka & duufaanta ku dhufatay, isla markaana loo gurmado Bulshada ku nool.
Inta la xaqiiyey Lix kalluumeysato Yemeniyiin ah ayaa ku geeriyotyay, 4 qof oo kalena waa ku dhaawacmeen degmada Xaafuun ee gobolka Karkaar, guryo badan ayaa ku dumay, iyada oo isgaariinta degaannadaas ay hawada ka maqan tahay.
Previous articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo kulan xasaasi ah la qaatay Safiirka Qatar ee Soomaaliya
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo ku biiray Shirka musharixiinta & xog laga helay